Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomple - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomple
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarija
Istudiyo sam sobufakazi sikhanya kakhulu kwaye sitofotofo kakhulu, sikwiindawo ezikufutshane neendawo eziphambili ezinika umdla. Phakathi edolophini yakudala kumgama wemizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo. Ungafikelela lula kwiflethi yam ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya ngeteksi okanye ngezithuthi zikawonke-wonke.
Ixesha lokubhalisa xa ufika libhetyebhetye, ngoko ungakhathazeki ukuba ufika emva kwexesha okanye inqwelo-moya yakho ilibazisekile. Ndiza kwenza konke okusemandleni am ukwamkela iindwendwe ezifika ngaphambi kwexesha/ukuphuma emva kwexesha ukuba andinazo ezinye iindwendwe okanye zihamba ngaphambi kwexesha/zifike emva kwexesha.
Ndilungiselele isikhokelo esishicilelweyo kunye namacebiso am okuhlala kwakho eVilnius.
Isitudiyo esinomtsalane kwindawo entle yokubuka, yokutyela neyokonwaba ebusuku. Uza kufumana zonke izinto eziyimfuneko, kuquka ikhitshi elinento yonke, umatshini wokuhlamba impahla neayini. Istudiyo sikhanya kakhulu kwaye sitofotofo, iyadi yabucala iqinisekisa ukuzola.
4.77 · Izimvo eziyi-323
Ibala labucala, isitalato esipholileyo. Kwimizuzu embalwa ukusuka kwiindawo ezithandwa ngabakhenkethi, iivenkile zokutyela ezintle, iibhari kunye neendawo zokonwaba ebusuku.
Ndonwabile kakhulu ukwabelana ngeengcebiso zezona ndawo zilungileyo zokutya kunye nokutyelela kwaye ndikuncede ukuba ujikeleze iVilnius okanye ngaphandle ukuba uceba ukwenza uhambo losuku okanye uqhubeke nokuhamba eLithuania. Ndazise ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngaphambi / ngexesha / emva kokuhlala kwakho.
Ndonwabile kakhulu ukwabelana ngeengcebiso zezona ndawo zilungileyo zokutya kunye nokutyelela kwaye ndikuncede ukuba ujikeleze iVilnius okanye ngaphandle ukuba uceba ukwenza uhambo…